Real Madrid Oo Dhabarka Loo Saaray Guuldaradii Ugu Horaysay Ee La Liga, Espanyol Ayaa Garaacday – Kooxda.com
HomeLa LigaReal Madrid Oo Dhabarka Loo Saaray Guuldaradii Ugu Horaysay Ee La Liga, Espanyol Ayaa Garaacday
Real Madrid Oo Dhabarka Loo Saaray Guuldaradii Ugu Horaysay Ee La Liga, Espanyol Ayaa Garaacday
October 3, 2021 Abdiwali Adan Jamac La Liga, Wararka Maanta 0
Kooxda kubadda cagta Espanyol ayaa guul-darradii u horreysay ee xilli-ciyaareedkan ee horyaalka u xambaarisay Real Madrid oo marti ugu ahayd magaalada Barcelona, waxaanay ku garaacday 2-1.
Laba gool oo ay u kala dhaliyeen Raul de Thomas iyo Aleix Vidal ayaa ugu filnaaday Espanyol inay saddexda dhibcood ka xoogsato Real Madrid oo xilli dambe uu gool aan waxba soo kordhin uu u dhaliyey Karim Benzema.
Ciyaartan oo uu Carlo Ancelotti isbeddello badan ku sameeyey safkiisa ayaa waxay natiijada kasoo baxday ka dhigan tahay, in wali ay Los Blancos hayso hoggaanka horyaalka oo ay leedahay 17 dhibcood, waxaanay isku mid yihiin Atletico Madrid oo ay dhinaca goolasha kaga horreyso, halka Espanyol ay soo gashay kaalinta 12aad iyadoo haysata 9 dhibcood.
Guul-darradan ayaa ah tii labaad ee xidhiidh ah ee Real Madrid soo gaadha, waxaana Arbacadii garoonka Santiago Bernabeu ku garaacday kooxda yar ee Sheriff oo ay Champions League isku Group yihiin.
Kooxda martida loo ahaa ee Espanyol ayaa daqiiqaddii 16aad hoggaanka u qabatay ciyaarta kaddib gool qurux badan oo uu u dhaliyey De Thomas oo kubbad uu dhinaca midig kasoo jabiyey Adri Embarba, halkaas ayaanay kooxda reer Catalonia ay damaashaad ku bilowday.
Espanyol ayaa u qalmaysay inay qaybta hore la timaaddo gool kale, waxaase kadiiday goolhaye Thibaut Courtois oo badbaadiyey dhawr kubbadood oo halis ahaa.
Tamarta iyo firfircoonaanta ciyaartoyda Espanyol ayaa dhibaato ku noqday Real Madrid, waxaana qaybta hore shaqayn waayey Toni Kroos oo ay u ahayd ciyaartiisii koowaad ee uu kusoo bilowdo iyo Luka Modric, halka Camavinga oo saddexaynayay na uu buuxin kari waayey booska uu ka maqnaa Casemiro oo xilli dambe beddel kusoo galay.
Qaybta labaad ayaa ugu bilaabatay Real Madrid iyadoo wali aan isla helin lugta oo ay kubaddoodu kala daadsan tahay, isla markaana khadka dhexe iyo dhinacyada ay ka shaqaysanayaan laacibiinta firfircoonaa ee Espanyol.
Daqiiqaddii 60aad ayay Espanyol ciyaarta ka dhigtay 2-0, waxaana gool labaad u dhaliyey Alexis Vidal oo ka daba baxay Nacho kaddib kubbad uu ka helay Bare, isla markaana ku hubsaday shabaqa uu waardiyaha ka ahaa Courtois.
Carlo Ancelotti ayaa isbeddelo qasab ah sameeyey, waxaanu saaray Camavinga oo waqtigii nasashada lagu soo beddelay Rodrygo halka Toni Kroos iyo Luka Modric uu mar kaliya is-raaciyey, waxyar kaddibna uu ka daba geeyey Vinicius Junior oo ay kubaddu dafirtay.
Karim Benzema ayaa Real Madrid soo nooleeyey daqiiqaddii 71aad waxaana uu u dhaliyey goolka kaliya ee kooxdiisu ay kulanka ka heshay oo aan waxba ka tarin guul-darradii koowaad ee horyaalka LaLiga kasoo gaadha Los Blancos xilli ciyaareedkan.
Gerard Pique Oo Farta Ku Fiiqay Cida Masuulka Ka Ahayd Guuldaradii Soo Gaadhay Kooxdiisa Kulankii Atletico Madrid.
Go’aanka Edinson Cavani Ee Ku Biirista Real Madrid Oo La Ogaaday.